आधुनिक चिकित्सा विज्ञानका नामुद ‘लापरबाही’ – Health Post Nepal
२०७५ भदौ १७ गते १८:२२
१. रिचार्ड स्मिथले पाएको गलत औषधि
यो सन् २०१० मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा घटेको घटना हो । ७९ वर्षीय रिचार्ड स्मिथ किड्नीका बिरामी थिए । उनी केही वर्षदेखि लगातार अस्पताल आएर डायलासिस गराइरहेका थिए । अचानक एकदिन उनलाई सास फेर्न निकै अप्ठ्यारो भयो र चिकित्सकहरूले उनलाई आइसियुमा राखेर उपचारको थालनी गरे । आइसियुमा राखेको अर्को दिन उनलाई पेट दुख्यो । ग्यास्ट्राइटिसको शंका गरी चिकित्सकहरूले उनलाई ‘एन्टासिड’ प्रेस्क्राइब गरे । तर, भइदियो के भने– एकजना आइसियुमै कार्यरत नर्सले एन्टासिडजस्तै देखिने ‘प्यानक्युरोनियम’ नामको अर्कै औषधि स्मिथलाई दिइन् ।
‘प्यानक्युरोनियम’ मानिसलाई बेहोस बनाएर इन्ट्युबेट गर्न प्रयोग गरिने औषधि हो । सो औषधि पाउनासाथ, स्मिथ बेहोस भए र डाक्टरहरूको लाख कोसिसका बाबजुद पनि एक महिनापश्चात् उनको मृत्यु भयो ।
त्यसपछि जे भयो…
झट्ट हेर्दा उक्त घटनामा, उपचारमा संलग्न नर्सले लापरबाही गरेको प्रस्ट देखिन्छ । तर, स्मिथका परिवारले अस्पतालमा हुलहुज्जत गरेनन्, कानुनी बाटो रोजे ।
अस्पताल र उपचारमा संलग्न ती नर्सलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दाएर भयो । तत्पश्चात् घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गर्न विज्ञ सम्मिलित टोली बन्यो । अन्तमा सो टोलीले जुन प्रतिवेदन बुझायो, त्यसले अस्पताल, चिकित्सक र नर्सलाई मात्रै होइन, स्वयम् स्मिथका परिवारलाई समेत एकपटक सोच्न बाध्य तुल्यायो ।
सबैले अपेक्षा गरेभन्दा विपरीत उक्त अनुसन्धानले घटनाको सबै जिम्मेवारी ती नर्सको टाउकोमा मात्र थुपारेन । बरु घटना घट्नुको मिहिन कारणहरू समेत केलायो । भएछ के भने– त्यस घटना घट्नुअघि उक्त अस्पतालमा औषधिको राम्रोसँग लेबलिङ (नाम टाँस्ने काम) गरिँदोरहेनछ र झट्ट सिरिन्जमा हेर्दा एन्टासिड र प्यानक्युरोनियम उस्तै देखिँदारहेछन्, जसका कारण सो दिन नर्स झुक्किएकी थिइन् ।
हाम्रोमा पनि फाट्टफुट्ट रूपमा यस्ता घटना घटिरहेका हुन्छन्, दाहिने घुँडाको अप्रेसन गर्दा देब्रेको हुन गएको, घाँटीको गर्दा पाठेघरको भएको आदि । तर, चिकित्सकलाई मात्र दोषी ठहराई यस्ता घटना सेलाउने गरेका छन् । साँच्चै त्यस्ता घटनाहरू भविष्यमा दोहोरिन नदिने हो भने यस विषयमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्दैन र ?
घटनापश्चात् प्रशासनले अस्पतालका सबै डिपार्टमेन्टहरूमा हेर्दा उस्तै–उस्तै देखिने औषधि सँगै नराख्न परिपत्र जारी गर्यो । साथै, ‘प्यानक्युरोनियम’ एनेसथेसियाले मात्रै चलाउन पाउने नियम बन्यो ।
सरसरती हेर्दा, नर्सलाई कारबाही गरी अस्पतालले बिरामीका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति दिएको भए त्यो मुद्दा त्यहीँनेर सकिन्थ्यो । तर, विज्ञ सम्मिलित अनुसन्धान टोलीले जुन निष्कर्ष दियो, त्यसले भविष्यमा घट्न सक्ने उस्तै प्रकृतिका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न पनि सहयोग पुर्यायो ।
२. रेजिना टर्नरको गलत सर्जरी :
यो सन् २०१३ अप्रिलको घटना हो । लगातार रूपमा स–साना पक्षघात भइरहेपश्चात्, अमेरिकन नागरिक रेजिना टर्नरले आवाज गुमाइन् ।
चिकित्सकहरूको सल्लाहबमोजिम उनको क्रानियोटोमी बाइपास (एककिसिमको मस्तिष्कको सर्जरी) गर्नुपर्ने भयो ।
अप्रेसनभन्दा अघि उनी ठमठम हिँड्न सक्थिन्, आफ्नो स्याहार आफैँले गर्न सक्थिन् । पेसाले वकिल रेजिना आफ्नै ल फर्ममा कार्यरत पनि थिइन् ।
तर, अप्रेसनपश्चात् भने उनी सम्पूर्ण रूपमा अपांग भइन् ।
अलिक पछाडि मात्र चिकित्सकहरूले पत्ता लगाए, टर्नरको देब्रे भागको बाइपास सर्जरी गर्नुपर्नेमा भूलवश दाहिने भागको सर्जरी भएको रहेछ । तर, जब कारण पत्ता लाग्यो, तबसम्म ढिलो भइसकेको थियो । उनको आवाज हरायो र अन्ततोगत्वा उनी २४ घण्टै स्याहार चाहिने अवस्थामा पुगिन् ।
उनको परिवारले अस्पताललाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गर्यो ।
घटनापश्चात् अस्पतालले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्यो । उक्त समितिले पहिलोपटक सर्जन र नर्सलाई मात्र दोषी देखाएर अस्पताललाई उन्मुक्ति दिने सजिलो बाटो रोजेन । बरु त्यस अस्पतालमा दैनिक रूपमा हुने सर्जरीको संख्यादेखि स्वास्थ्यकर्मीलाई लगाइने ड्युटी हावर्समाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठायो ।
त्यसैको प्रतिवेदनमा टेकी ‘रङ साइट सर्जरी’ अर्थात् गलत ठाउँमा गरिने अप्रेसनबारे संसारभर बहस चर्कियो । अमेरिकामा मात्र साना–ठूला गरी सातामा ४० वटाभन्दा बढी रङ साइट सर्जरी हुने सनसनीपूर्ण समाचार बाहिर आयो ।
हो, त्यसै घटनाको अनुसन्धान र प्रतिवेदनले जन्माएको बहसका कारण संसारभर सर्जरीपूर्व पूरा गर्नुपर्ने प्रोटोकललाई अझ परिष्कृत र सशक्त बनाइएको छ ।
३. एन्डी वारहोलको रहस्यमय मृत्यु
यो सन् १९९० को घटना हो । प्रसिद्ध अमेरिकी कलाकार एन्डी वारहोल अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग भयंकर डराउँथे । यसकारण नै उनले आफ्नो पित्तथैलीको शल्यक्रिया पछि–पछि सारिरहेका थिए । तर, दिन प्रतिदिन अवस्था नाजुक बन्दै गएपश्चात् भने उनी शल्यक्रिया गराउन राजी भए ।
१९८७ फेब्रुअरीमा उनको शल्यक्रिया भयो । तर, दुर्भाग्यवश, शल्यक्रिया भएको अर्कोदिन रहस्यमय ढंगले उनको मृत्यु भयो ।
सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको सर्जरीपश्चात् उनको अवस्था सामान्य भइसकेको थियो । तर, अर्को दिन घाम झुल्किँदानझुल्किँदै अचानक उनको मुटु बन्द भयो । यसरी एक प्रसिद्ध अमेरिकी कलाकारले संसारको सबैभन्दा सुविधासम्पन्न अस्पतालमा मृत्युवरण गर्नुपर्यो ।
अस्पतालको लापरबाहीले मृत्यु भएको भनी उनका आफन्तले मुद्दा दर्ता गराए । लामो अनुसन्धान भयो तर पनि यकिन कारण पत्ता लाग्न सकेन ।
पोस्टमार्टम गर्दा उनको फोक्सो र शरीरका अन्य भागमा समेत पानी भरिएको देखियो । यसैमा टेकेर वारहोलका वकिलले उनलाई दिइनुपर्ने फ्ल्युड (स्लाइन पानी) को मात्रा डबल पर्न गई यस्तो भएको भनी दलिल पेस गरे । तर, अदालतमा त्यो पुष्टि भएन ।
अस्पतालमै स्वास्थ्यलाभ गर्दै गर्दा अचानक उनी बेहोस भए । चिकित्सकले बचाउने लाख कोसिस गरे पनि अचेत अवस्थामा रहेका इंग्लिसले त्यसपछि कहिल्यै आँखा खोलेनन् ।
त्यत्रो जोखिमपूर्ण सर्जरीबाट जोगिएका वारहोलको मुटु कसरी अचानक बन्द भयो ?
चिकित्सा विज्ञान आफैँमा एक अनिश्चितताको खेल हो । अरू विज्ञानमा जस्तो २ मा २ जोडे ठ्याक्कै ४ हुने हिसाब यहाँ लागू हुँदैन । फेरि, आजसम्म जति मानव शरीरबारे पत्ता लागेको छ, भनिन्छ, त्यो सम्पूर्ण भागको एक प्रतिशत पनि होइन ।
४. सिबिएसले गरेको सनसनीपूर्ण खुलासा
३४ वर्षीय रोड्नी इंग्लिस जन्मजात स्पाइना बाइफिडा नामक समस्याबाट ग्रस्त थिए । नियमित उपचार गराइरहेका इंग्लिस यसपटक पनि सामान्य संक्रमणका कारण अस्पताल भर्ना भएका थिए । केही दिन अस्पतालमै राखी उनको सामान्य उपचार भइरहेको थियो ।
अस्पतालले स्पष्ट रूपमा मृत्युको कारण बताउन सकेन, तर मर्ने वेलामा उनलाई एनेमिया भएको तथ्य बाहिर ल्यायो । यसै तथ्यमा टेकेर अमेरिकन सञ्चार सिबिएसले विभिन्न विज्ञहरूको सहयोगमा अनुसन्धान गर्यो ।
अन्तमा एउटा सनसनी मच्चाउने समाचार बाहिर आयो, जसमा भनिएको थियो– रोड्नी इंग्लिसलाई दिइएको गलत रगतका कारण उनको मृत्यु भएको हो । त्यस समाचारले रेडक्रसजस्तो संस्थालाई पनि शंकाको घेरामा तानेको थियो ।
आखिर रेडक्रस सोसाइटीले त्यत्रो होसियारीपूर्वक तयार गरेको ब्लड जो पुनः १०–१२ ठाउँमा राम्रोसँग परीक्षण गरिन्छ, कसरी गलत भयो त ? जुन आजसम्म पनि रहस्यपूर्ण नै छ ।
एउटा बिरामीको उपचारमा कसरी एउटा चिकित्सक वा नर्स मात्र नभई धेरैवटा सेवाप्रदायकहरू संलग्न हुन्छन् र कुनै एउटा ठाउँमा हुने सानो भूलको मूल्य कति भयावह हुन्छ भन्ने उदाहरण यस केसबाट लिन सकिन्छ ।
पुनश्च, प्रस्तुत दृष्टान्तहरू संसारभर लापरबाही हुन्छन्, तसर्थ यहाँका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले पनि लापरबाही गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आशयका दिइएका पक्कै होइनन् । बरु संसारका विकसित भनिएका देशहरू र प्रतिष्ठित मानिएका अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट समेत त्रुटि हुन्छन् भन्ने भाव प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो । आखिर डाक्टर पनि मानव हो र मानिसले जान–अन्जानमा अनेक गल्ती गरिरहेको हुन्छ ।
मानिसबाट कहीँकतै गल्ती त भइहाल्छ । यस्ता गल्ती पूरै निमिट्यान्न त बनाउन सकिँदैन, तर यिनलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु वाञ्छनीय छ । भविष्यमा गल्ती दोहोरिन नदिन थप अध्ययन र अनुसन्धानको खाँचो छ ।
4 thoughts on “आधुनिक चिकित्सा विज्ञानका नामुद ‘लापरबाही’”
Well and contextulized article. Thank you
Again the biased bunch of people will claim that medical personnel are trying to hide their inefficiency. We deal with the patient in worst situations but the expectations are as if we belong to the states.
NC Oli says:
हाम्रो देशमा प्राय एक जना चिकित्सक ले दिनमा 100 जनासम्म बिरामी हेर्नपर्ने बाध्यता छ। जहाँ अति आबस्यक स्वास्थ्य उपकरन/ औसधि समेत हुदैनन। यस्तो अवस्थामा अझ मान्छेहरु 100% ग्यारेन्टि खोज्छन, जुन दुनियभरी नै सम्भब छैन।
नेताले बिकस गरेको अल्पशिक्षित देश!!
लामो समय कुर्सीमा बसे हुन्छ यस्ता समस्या, के हुन् उपाय?
कसरी सुरु भयो हात धुने बानी? इतिहासले टेक्यो दुई शताब्दी
दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा : साना ‘कुरा’ले बल्झाएका ठूला रोग
क्यान्सर सचेतनामा ओझेल परेका यी पाँच मुद्दा
कोरोना खोप व्यवस्थापन, अबको चुनौती र रणनीति
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किन?
गर्भवतीमा स्क्रब टाइफस र कोभिड–१९, कति गम्भीर ?
यी हुन् आत्महत्या रोकथाम गर्ने चार रणनीति